Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
202204 / 22(ရှေ)
[အရေးကြီးသည်] ပြန်လည်ပြန်ကြားရေးသတိပေးချက်ကာလအတွင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်
202202 / 14(လ)
Ota Ward Hall Aplico ၏ နှစ်ရှည်ပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးချက်နှင့် ပိတ်ပြီးနောက် စက်ရုံသုံးလျှောက်လွှာကို ပြန်လည်စတင်ခြင်း
202201 / 26(ရေ)
Ota Ward Plaza နှစ်ရှည်ပိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်း
202109 / 27(လ)
[အရေးကြီး] Kumagai Tsuneko Memorial Hall အားယာယီပိတ်ခြင်းအကြောင်း
ပြတိုက်ခံစားကြည့်ပါ! ~ သတိရအောက်မေ့ခန်းမ ~
ဖျော်ဖြေပွဲ / ပို့ချချက်
202205 / 15(日)
202205 / 01(日)
စုဆောင်းမှု Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
"ဘက်သစ်ရှိ ဂျပန်ပန်းချီကားများအကြောင်း Ryuko's Eyes on the New Side" လက်ရာပြခန်းတွင် ဟောပြောပွဲကျင်းပ
202204 / 23(မွေ)
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
တိုကျိုရှိ ကြောင်များ ပြပွဲတွင် Meguro ပြတိုက်ရှိ Ryuko Memorial Hall မှ လက်ရာ ၂ ခု ပြသခဲ့သည်
Ishikawa Prefectural Museum of Art ပြပွဲတွင် Ryuko Memorial Museum မှ "Dream" ကို ပြသခဲ့သည်
စုဆောင်းမှုတွင် ပစ္စည်းများ၏ Catalog 1 "Ryuko Kawabata" ၏ "တောင်ပင်လယ်ပုံကြမ်း"" ကို ဖန်တီးထားပါသည်။
202204 / 17(日)
Bunka no Mori ပါဝါစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစစ်ဆေးခြင်းကြောင့်ပိတ်ခြင်းအကြောင်း
Otawa Festival 2022 သည် ဂျပန်-နွေးထွေးပြီး ငြိမ်းချမ်းသော သင်ကြားရေးအိမ်သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း << ရိုးရာအနုပညာ တင်ဆက်မှု ထုတ်ဝေမှု >> "ဂျပန်ဂီတနှင့် ဂျပန်အကများ၏ အောင်မြင်မှု မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း" "သုံးလပတ်လုံး (ဗီဒီယိုဖန်တီးခြင်း)" YouTube တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
Ota Bunkanomori သတင်းစင်တာစာကြည့်တိုက်ထောင့်နှင့်မာလ်တီမီဒီယာထောင့်၏အားလပ်ရက်များအကြောင်း
ဖြစ်ရပ်များ Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Shiro Ozaki သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Ozaki Shiro Memorial Hall "Memorial Hall Note" (အမှတ် XNUMX) ထုတ်ဝေပြီးပါပြီ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Sanno Kusado သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Sanno Sodo Memorial Hall "Memorial Hall Note" (အမှတ် 6) ထုတ်ဝေပြီးပါပြီ။
202204 / 07(သစ်သား)
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ“ သတိရအောက်မေ့ခန်း” (အမှတ် ၅) ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
202204 / 05(မီး)
စုဆောင်းမှု Sanno Kusado သတိရအောက်မေ့ခန်းမShiro Ozaki သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Reiwa 4th နှစ်တွင် XNUMXnd building gallery talk တွင် ပါဝင်သူများ
202204 / 01(ရှေ)
အသင်းမှ နိုင်ငံသားပလာဇာတကယဉ်ကျေးမှုသစ်တောRyuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမKumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမSanno Kusado သတိရအောက်မေ့ခန်းမShiro Ozaki သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ 'ART bee HIVE' vol.10 ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
202203 / 02(ရေ)
Ota Ward Culture Promotion Association မှ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအသစ်များ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍
202203 / 01(မီး)
ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည့် "Kaze Kaoru Museum Concert" ကို ကျင်းပခြင်း။
Ota ရပ်ကွက် ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှ ဝန်ထမ်းများမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအသစ်များ ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
202202 / 15(မီး)
202202 / 03(သစ်သား)
202202 / 01(မီး)
Magome Writers' Village Fantasy Theatre Festival အထူးဆိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီး 2021 ခုနှစ် ထုတ်လုပ်ရေးဗီဒီယိုကို ထွက်ရှိပါပြီ။
202111 / 15(လ)
Ota Ward Hall ၊ Aprico Small Hall ၊ Exhibition Room ၊ Studio A တို့ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့် ပြန်လည်စတင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းအကြောင်း
202110 / 19(မီး)
ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းပြီးဆုံးခြင်းကြောင့် Ota Ward Plaza Gymnasium ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
202110 / 15(ရှေ)
စက်ရုံထဲကနေ Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
202110 / 05(မီး)
Ota Bunkanomori ရှိကာရာအိုကေအသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းအကြောင်း
202109 / 11(မွေ)
စက်ရုံထဲကနေ Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
စက်ရုံရှိလေ ၀ င်လေထွက်အခြေအနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်အစီရင်ခံစာအကြောင်း
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် (သောကြာနေ့) တွင်ယာယီပိတ်ခြင်းအကြောင်း
202106 / 24(သစ်သား)
ဖြစ်ရပ်များ Kumagai Tsuneko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၏ "စက္ကူနှင့်လက်ရေးလှများ - မှင်မှစီးဆင်းမှု၊ အချိန်စီး ၀ င်မှု" ၏နိဒါန်းဗီဒီယိုအကြောင်း။
202106 / 01(မီး)
Ota Ward JHS လေသံစုံတီးဝိုင်းအထူးတလည် "Treasure Island" ရုပ်ရှင်ကို YouTube တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
202104 / 23(ရှေ)
202104 / 16(ရှေ)
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာစီးပွားရေး OTA အနုပညာစီမံကိန်း "Machinie Wokaku" "Video Kamata Reactor Project" ဗီဒီယိုကို YouTube တွင်ရရှိနိုင်ပြီ!
202104 / 15(သစ်သား)
နှစ် ၃၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပြပွဲ "Tsuneko Kumagai နှင့် Connections of Book" ၏နိဒါန်းဗီဒီယိုအကြောင်း
Kana ၏အလှအပပြပွဲနိဒါန်းဗီဒီယိုအကြောင်း "ဂျပန်ရာသီလေးရာသီကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်ပထမအလယ်ခေတ်ကဗျာဆရာကိုအာရုံစိုက်ခြင်း"
202103 / 13(မွေ)
Maina Yokoi ၏ encore သီချင်းအကြောင်း Aprico Lunch Piano Concert Vol.68
Otawa ပွဲတော် "အစဉ်အလာကိုအမွေခံသော Tsunagu-Treasures-" အထူးဗီဒီယိုကိုယခု YouTube တွင်ရနိုင်သည်
202103 / 01(လ)
202102 / 24(ရေ)
"Magome Bunshimura Theatre Festival 2020 XNUMX Edition Imaginary Stage" ဗီဒီယိုကို YouTube တွင်ရရှိနိုင်ပြီ!
202102 / 10(ရေ)
Ota Ward City Promotion“ Unique Ota” တွင်ပြတိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
202012 / 01(မီး)
အသင်း၏တရားဝင် LINE အကောင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည်!ကျေးဇူးပြု၍ သူငယ်ချင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ။
202006 / 02(မီး)
အသင်းအဖွဲ့၏တရားဝင် Instagram ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
202005 / 28(သစ်သား)
စက်ရုံထဲကနေ Shiro Ozaki သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
2022 နှစ်ပေါင်း5လအတွင်း
မကြာသေးမီကဖျော်ဖြေပွဲ / ဖြစ်ရပ်များ
2022 05 / 19(သစ်)
Reiwa4နှစ်မြောက် အလုပ်လျှောက်လွှာ ရှင်းလင်းပွဲ
14:00 အဆုံး 16:00 Start ကို
2022 05 / 20(ငွေ)
[စီစဉ်ထားသောနံပါတ်အဆုံး]Hikoichi၊ Baijiu၊ Shirano ဧည့်သည်- Niraku Hayashiya
2022 05 / 21(မြေဆီလွှာ)
Ebisu Philharmonic Orchestra XNUMXst စာရင်းသွင်းခြင်း ဖျော်ဖြေပွဲ
စတင်ချိန် 14:00 မှ 16:00 ထိ
2022 05 / 25(ရေ)
Yamato Dance Study Group Folk Dance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Ota Bunkanomori စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်စီမှစီစဉ်ပေးသည့်စွမ်းဆောင်ရည်
2022 05 / 26(သစ်)
အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ စက်ဘီးစီးခြင်း၏ ဘေးကင်းမှုကို လေ့လာပါ။ !!
Blue Sky တိုကျိုအခမဲ့အက
13:00 အဆုံး 16:00 စတင်ပါ
2022 05 / 28(မြေဆီလွှာ)
SHO-MA de ရှိုး။ !!
12:00 အဆုံး 18:45 Start ကို
2022 06 / 04(မြေဆီလွှာ)
သံကြိုး-တယော၊ ဗီအိုလာနှင့် ဆဲလ်လို-
2022 06 / 05(နေ့)
တနင်္ဂနွေ နေ့လယ်တွင် JAZZ လွမ်းဆွတ်သော ရုပ်ရှင်တေးဂီတ စုစည်းမှု
2022 06 / 08(ရေ)
2022 06 / 09(သစ်)
Mayuko Katakura အထူး Quintet
2022 06 / 15(ရေ)
2022 06 / 18(မြေဆီလွှာ)
2022 Asuka Soken Co., Ltd. ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပြိုင်ပွဲ
2022 တစ်နှစ်6လ9နေ့က (ကြာသပတေးနေ့)
【စောင့်ဆိုင်းစာရင်း】Hikoichi၊ Baijiu၊ Maruko ဧည့်သည်- Hiro Matsumoto
2022 တစ်နှစ်6လ 24 နေ့စွဲ (ရွှေ)
2019 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သောသုံးနှစ်ရပ်ကွက်နေထိုင်သူ - ပါဝင်မှုအော်ပရာစီမံကိန်း။ ဤစီမံကိန်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတက်လှမ်းရန်နှင့်တတိယနှစ်တွင်အပြည့်အဝအော်ပရာတင်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။
Ota Ward ကို ပန်းချီပြခန်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ အများသူငှာ နေရာများတွင် ခင်းကျင်းပြသမည့် ပရောဂျက်တစ်ခု။ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူများစွာအတွက် အနုပညာကိုဖွင့်ပြီး တက်ကြွသောမြို့ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
“မဂိုစာရေးဆရာရွာ” သည် တစ်ချိန်က အုတရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ "Magome Writers' Village Fantasy Theatre Festival" သည် ပြဇာတ်နှင့် အကကဲ့သို့ သရုပ်ပြအနုပညာနှင့်အတူ Ota Ward နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အနုပညာရှင်များ၏ လက်ရာများကို လူထုအခြေပြု ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ
ဤသည်မှာဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပါသော Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှထုတ်ပြန်သောသတင်းအချက်အလက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ဒါဟာသုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။
အသစ် coronavirus ရောဂါကူးစက်မှုသည်
Ota Ward ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များစသည့်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးဝင်သောဆိုဒ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း။